Gazlayting - maninona no lasa mpiasa mpitrandraka ny lehilahy?
Gazlaiting - inona ary ary ny fomba hisorohana izany?
Maro ireo karazana fitarihana manapatapaka, saingy ny tanjon'izy ireo dia ny hanery olona iray hanao ny hetsika mifanohitra amin'ny tombontsoany manokana. Indraindray ny "niharam-boina" dia miezaka manohitra, ary indraindray manaiky an-tsitrapo ny mpamitaka, satria misalasala ny maha-araka ny tokony ho izy ny zava-mitranga. Io trangan-javatra io dia antsoina hoe gaslaiting.
Gazlayting - inona ity?
Ny siansa tamin'ny taonjato faha-20 dia nisy tetik'asa iray izay mamaritra ny fanodikodinam-peo amin'ny fahatsiarovan'ny olona hafa momba ny zava-misy iainan'ny tontolo manodidina azy. Miverina amin'ny lohatenin'ilay sarimihetsika "Gas Light" (Gas Light) miorina amin'ny play "Patrick of the Angel" (Patrick Hamilton) (1938). 30 taona taorian'ny namoahana ilay sary, namoaka ilay boky hoe "Ny tsiambaratelo henjana indrindra: fanararaotana ara-nofo" ny Amerikana vavy feminista Florence Rush, izay namintina ny fehin-kevitra momba ny fitantanana ara-tsaina nofaritana tao amin'ny sarimihan'i George Cukor.
Amin'ny ankapobeny, ny grenady dia endriky ny herisetra ara - psikolojika izay misy olona iray manandrana manakorontana ny mpanohitra azy. Manipuler ny fahatsiarovan-tenany, manery ny mpiara-miasa izy:
mba hisalasala amin'ny fahatsiarovanao;
mieritreritra izay tsy tena izy;
misalasala amin'ny fahamarinan'ny zavatra mitranga sy ny mifanentana amin'ny tena manokana;
mba hihevitra fa nifindra tao an-tsainy izy.
Karazana fanodikodinana - fanala mandeha amin'ny gaza
Manipika ny fahatsapan'ny olona iray hafa ary manery azy handray ny fomba fijery mety dia afaka amin'ny alalan'ny fitondran-tena sy ny fomba fiteny. Farany, ny mpiara-miasa (izay ihany koa ny niharam-boina, izay ny fiantraikany dia tarihina) dia hieritreritra sy hanao ny asan'ny mpanonta. Ny tetik'ady mahasorena indrindra dia ny jiro mitaratra, satria manimba ny fahatsapana ny zava-misy izany. Iray tokana iray feno toky no nilaza ilay mpanohitra hoe "Tsy misy izany!" Tsy manafoana ny finoan'ny mpandray anjara ao aminy. Mpitarika ny fiantraikany:
mandà ny zava-misy izay manan-danja amin'ny mpanohitra azy;
dia manondro ny tsy fahaizan'ny saina - gender, age, physiological.
Gazazanaka eo amin'ny mpivady
Ny fomba fiasan'ny herisetra ao an-tsainy matetika dia manatona mpitsabo, mpitsabo, mpandainga maloto. Ireo olona ireo dia mandresy lahatra amin'ny lainga amin'ny hafa, manaporofo fa ny fomba fijeriny no hany iray marina. Ankoatra izany, ny "fampakarana voarara" dia azo ampiasaina amin'ny mpivady, indrindra ireo izay manaiky ny herisetra ara-batana. Taorian'ny fifandonana tamin'ny fanafihana, ny lafiny iray (lozam-pifamoivoizana) dia handà ny fandisoam-panahiny. Na dia tsy fantany aza hoe inona no mitranga, dia manohy ny fampiasana azy io ny jiro.
Ny herisetra ara-psikolojia ao an-tokantrano dia tsy mahazatra amin'ny fiaraha-monina maoderina Matetika ireo niharan'ny fanodikodinana no solontenan'ny firaisana ara-nofo malemy, na dia mbola tsy mazava aza ny antony mahatonga ny lehilahy ho Gazlayter. Tamin'ny voalohany, tsy nahatakatra ilay niharam-pahavoazana fa mitranga eo amin'ny fitondran-tenan'ny mpiara-miasa ny tsy fahampiana. Saingy manomboka miady tsikelikely ny fiteniny izy ary manaiky tanteraka ny tenin'ilay mpanafika.
GAZETY ho an'ny ankizy
Ny herisetra ara-tsaina dia mety hitranga eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, eo amin'ny ankizy sy ny havany. Ohatra amin'ny fanodikodinan'ny tokantrano:
Raha misy ray na raim-pianakaviana milaza tsy an-kijanona ny zanany fa tsy ampy izy ary manao "tsy araka ny tokony ho izy".
Ny ankizy dia heverina ho zavatra izay tsy azony ovaina noho ny taonany: kely izy ary tsy afaka manapa-kevitra ho an'ny tenany, manome torohevitra, mifanohitra amin'ny olon-dehibe, sns.
Ny reny sy ny rainy dia manamarina ny herisetra ao amin'ny fianakaviana .
Raha misy ankizy lehibe iray mahatonga ny ray aman-dreny hisalasala ny fahatsiarovany azy manokana ("nilaza taminao aho (a), tsy tsaroanao ve?"), Ity koa dia ohatra amin'ny gazy.
Ny mpamono gazy mahazatra dia miteraka fahatsapana tsy fandriampahalemana sy tsy fahampiana eo amin'ilay niharam-boina, ary manafoana ny fitondran-tenany. Ny tanjona lehibe indrindra dia ny manana fahefana feno amin'ny olona ary hiaro ny tsy mety. Tsy toy ny olon-dehibe, fa sarotra be amin'ny ankizy ny manohitra ny manipuler, tsy takatr'izy akory fa hoe iharan'ny herisetra ara-pihetseham-po izy ary tsy afa-mandositra ny mpanafika. Ny vokatr'izany dia ny fahamendrehan'ny tena sy ny psyche kapila.
Gazlaying amin'ny asa
Ny sampana matihanina ihany koa dia miditra ao amin'ny faritra mety hisian'ny herisetra ara-tsaina. Ny mpiasan'ny faritra any ivelany dia nanjary lasibatry ny lehibeny, izay manala baraka azy ireo ary mitarika azy ireo ho amin'ny fanimbana ara-pananahana. Tsy mahafantatra hoe inona ny jiron'ny fanaovan-gazy, ny mpitarika dia afaka mihiaka amin'ny mpanara-maso, miantso zavatra tsy mety ary manohintohina ny fandroahana. Ary ny mpiasa dia miezaka tsara amin'ny andraikiny. Ny mpampiasa dia mampiasa ny paikady "carrot and stick", izany hoe ny taktika roa:
Voalohany dia mampiharihary ny tsy fisiana sy ny adala ny mpanara-maso.
Avy eo dia milaza izy fa "alainy am-po."
Afaka mamindra fitiavana ve ianao?
Gazitre dia olona tsotra miaraka amin'ny filany sy ny fahalemeny, na dia ampiasaina amin'ny fisoloana hevitra sy hanodina ny hafa aza izy. Ny olona izay nihaona tamin'ny mpanohitra toy izany tao anatin'ny tena fiainana dia mety hiatrika ny fifandonana mitombo. Tena sarotra amin'ny fianakaviana izany. Ny fanontaniana fototra izay manentana ny gazlaytera mpiara-miasa: azony ve ny tiany? Amin'ny ankapobeny dia tia ny tenany ny mpanamboatra, saingy tsy misy olona hafahafa aminy. Indraindray ny hetsika ataony dia tsy herisetra . Raha tokony ho ny fanafihana sy ny fahadiovam-pitondrantena, dia mety handreroka ny fisainana mihamitombo ianao, saingy ny fitiavana toy izany dia tsy ho tso-po.
Gazlayting - ahoana no hanohitra?
Gazlayt dia fifandraisana amin'ny karazana manokana izay mitranga eo amin'ny olona akaiky na ireo izay eo akaikiny (mpiara-miasa, mpiara-mianatra, mpiara-monina, sns). Azonao atao ny manandrana manao ireto manaraka ireto:
Raha azo atao, manaisotra tanteraka ny fifandraisana amin'ny mpanafika na mametra azy farafahakeliny.
Mitadiava fahatokisan-tena, hery manokana, mifanaraka amin'izany.
Rehefa manafika fahatsiarovana ratsy, ka tsy misy fisalasalana, soraty ny hevi-dehibe rehetra ao anaty kahie na amin'ny dictaphone.
Aza miteraka trompetra sy fihantsiana. Raha mitohy mankany amin'ny fantsona tsy ilaina ny fifampiresahana, atsaharo izany.
Sarimihetsika momba ny fanamafisam-peo
Raha misy ny ahiahy fa ny fanavotana dia atao amin'ny olona, ​​inona no tokony hatao mba hianarana bebe kokoa momba izany? Ny fomba fiasan'ny herisetra ara-psikolojika sy ny fanodikodinan'ny "fanoloana ny zava-misy" dia rakotry ny sary mihetsika amin'ny karazana samihafa. Ankoatra ny fampakaram-bintana "Light Light" (1944), izay nanome ny anarana manaingo ny anarana, dia sary toy ireny:
"Rebecca" , 1940. Thriller Hitchcock momba ny vehivavy iray izay mandehandeha tsikelikely trano vaovao.
"Anjely an-dalambe" , 1940. Ny dikan-drakitra voalohany amin'ny play Hamilton.
"Dogville" , 2003. Anisan'ny sarimihetsika malaza momba ny herisetra ara-tsaina.
"Zanaky ny Rosemary" , 1968. Ny herim-pon'ilay mpandresy Polanski dia nandresy lahatra ny olona tamin'ny "zava-misy samihafa".
"Duplex" , 2003. Comedy momba an'i Granny, izay mitaingina ireo mpihinana vaovao.
Inona no fihatsarambelatsihy ary nahoana no mihatsaravelatsihy ny olona?
Inona no atao hoe paranoia ary ahoana no maneho azy io?
Ahoana raha tsy te hody any an-trano aho?
Ahoana ny fomba hampivelarana ny tananao havia, raha toa ianao ka omena anao?
Trichotillomania - inona ity aretina ity?
Inona moa ny fitiavan-tanindrazana amin'ny tontolo maoderina ary inona ny karazana fanavakavahana?
Ny tea avy amin'ny ravinkazo dia tsara sy ratsy
Nirodana ny jiron-jiro mamokatra herinaratra - inona no tokony hataoko?
Fanamafisana ny fantsika amin'ny vovoka acrylic ho an'ny gel-lacquer
Fandavana ny alimo
Gogoshary any Moldavia mandritra ny ririnina
Neuromultivitis ho an'ny ankizy
Fomba hisafidianana mpanefy mpanefy - torohevitra mahasoa ho an'ny mpamboly
Amin'ny akanjo hanaovana akanjo hoditra - sary 84 mipika amin'ny lantovaly hoditra
Bronchitis mitebiteby - fitsaboana
Ahoana no hankalaza ny zazalahy iray taona?
Loezy lymphoblastic acute
Paint for facade